Fsnd ILS Yiqiniso kulungiselelwa?
Umbuzo Fsnd ILS Yiqiniso kulungiselelwa?
unyaka 1 8 edlule - unyaka 1 8 edlule #644 by ricsmi
Sawubona kimi futhi.
Ngiye kulayishiwe abanikeze asebenza nabo ethuthukisiwe ukuze defualt 747 futhi yayo enhle ngempela, kodwa inkinga kuphela Nginezinye yilapho i ufuna ukusetha i-lokubikezela ILS khona akubonakali kube nganoma iyiphi indlela ukuze usethe isihloko Yebo, ku abanikeze asebenza nabo odlule uzibekela ke nge isibonisi nav kodwa kusukela entsha ine gpws uhlelo nolonger yayo lapho.
(Hlela) Akuve lena. www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/55/568
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-8 ezedlule ricsmi.
unyaka 1 8 edlule - unyaka 1 8 edlule #645 by Gh0stRider203
Angivamile ingazihlupha Yiqiniso njengoba uma ikhiyiwe phakathi ILS, njengoba esiqondisa ngokwaso phansi glideslope.
wena nje kufanele usethe NAV1 kuya freq efanele, futhi ushintshe indlela nav kusuka GPS Nav (enginakho CTRL SHIFT N) ilibangise ukuthi ngakho Anginayo ukusebenzisa igundane.
futhi yebo ushintsho navigation ukuzifinyelela
unyaka 1 8 edlule - unyaka 1 8 edlule #646 by ricsmi
Oh kulungile, angizange uzibuze mayelana nesizinda Yiqiniso, kuhle ukwazi ukuthi njengoba kusho faffage kancane ngesikhathi kokwehla. XD
unyaka 1 8 edlule #647 by Gh0stRider203
yeah Ngisanda setha Nav 1 kuya freq efanele, kanye kanye Ngingumfana eh .... ngaphakathi 20mi kwesikhumulo sezindiza zikleliswe ne evulekile (Ngithanda izindlela eside) futhi ngezithuba FL300, ngizobuya usiphendule GPS ukuze Nav, futhi UMA le "amabhola" bonisa up ngizobuya usiphendule kusukela vor LOC (okungenani Ngicabanga ukuthi lokho elikushoyo lOL Ngingumfana CS C-130 okwamanje lol), APP wasiqashisa ukukuqondisa Ngiphiwe. UMA Ngingumfana abawasebenzisayo ngizobuya udedele engamamitha yami kuze kube yilapho ukukhanya ALT HLD iyavala okuyilapho, Ngingumfana nje kanye for the ride lol
Isikhathi ukudala page: 0.674 imizuzwana